“Mamnuucidda Shirkada DP World Annaga Nama Khuseyso” Maamulka Puntland Oo Ka Hor-yimid Go’aanka Dawladda Soomaaliya Ku Laashay Heshiiska DP World Ee Dekeda Berbera.
Bosaso(Gebogebonews)-Wasiirka Dekedaha maamul gobolleedka Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa sheegay in aanay Puntland Waxba ka quseyn go’aanka Baarlamanka Soomaaliya ay shaqada dalkaasi kaga mamnuuceen Shirkadda DP-World.
Maamulka Dekeda Boosaaso ay gacanta ku heyso Shirkadda P&O oo hoos tagga DP World ayaa sheegay in kaliya amarkaan uu ku eg yahay shirkadda DP World.
Siciid Maxamed Raage oo ku sugan Imaaraatka Carabta ayaa sheegay in Maamulka Puntland ay la socdaan dhaq-dhaqaaqyada Shirkadda Maamusha Dekeda Boosaaso ee P&O.
“Xeerkani ma saameynayo Puntland, waxa uu saameynayaa Somaliland oo heshiis kula jirto shirkadda DP World, balse Puntland waxa ay heshiis kula jirtaa Shirkadda P&O oo laga leeyahay Imaaraatka Carabta” ayuu yidhi Wasiirka Dekeda Puntland.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay go’aan ka dhanka ah Shirkadda Caalamiga Dekeda ee Dubai (DP-World) kaga mamnuucay in Soomaaliya ay ka howlgasho,Shirkadda P&O oo hoos tagga Shirkadda DP-World ayaa maamusha Marsada Boosaaso.